Ahoana no fomba ahazoan'ny mpivarotra am-bidy tombony ny tombontsoa ara-toekarena iraisam-pirenena amin'ity Krismasy ity? | Martech Zone
Ahoana no ahafahan'ny mpivarotra am-bola mitrandraka ny tombontsoa ara-toekarena iraisam-pirenena amin'ity Krismasy ity?
Alarobia, Desambra 2, 2015 Alarobia, Desambra 2, 2015 Nir Debbi
Miaraka amin'ny tsena manerantany momba ny ecommerce manerana izao tontolo izao izay sandaina ankehitriny £ 153bn ($ 230bn) amin'ny 2014, ary novinavinaina hitombo ho £ 666bn ($ 1 trillion) amin'ny taona 2020, ny fotoana mety ho an'ny mpandraharaha UK dia tsy mbola lehibe lavitra. Ireo mpanjifa iraisampirenena dia mankafy miantsena hatrany amin'ny fampiononana avy ao an-tranony ary vao mainka manintona kokoa izany mandritra ny fialantsasatra, satria misoroka ny vahoaka betsaka sy ny adin-tsaina ateraky ny fiantsenana Krismasy.
Research from Fanondroana nomerika an'i Adobe manolotra ny vanim-potoanan'ny fety amin'ity taona ity izao dia maneho ny 20% amin'ny fandaniana amin'ny Internet eran-tany. Amin'ny alàlan'ny Krismasy manolotra ampaham-bola be dia be ho an'ireo mpivarotra am-barotra, ny marika be faniriana dia mila mahazo antoka fa manana ny fizotrany mety hanararaotana ny fahafaha-manao an-tserasera - tsy any an-trano ihany fa any ivelany.
Mampanantena fidiram-bola be dia be ho an'ny mpivarotra ny ecommerce iraisam-pirenena satria manome marika tsy manam-paharoa hitombo haingana ny orinasa eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ahafahan'izy ireo manolotra ny entany ho an'ny mpanjifa amin'ny tsena ivelany, tsy mila fanatrehana ara-batana. Ny fanoloran-tena amin'ny fanomezana traikefa momba ny fiantsenana tsy misy tohika no ho mpanentana ny varotra an-tserasera manerantany amin'ity Noely ity.
Ny olana dia, matetika ny mpivarotra maro no sahirana mampifanaraka ny varotra tanindrazana manaitra amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izany dia vokatry ny sakana marobe amin'ny sisintany manodidina ny ecommerce toy ny taha ambony amin'ny fandefasana, ny haba tsy fantatra tsy fantatra, ny fiverenana tsy mahomby ary ny fahasahiranana manohana ny vola eo an-toerana sy ny fomba fandoavam-bola. Ireo olana ireo dia mitondra lanjany vaovao amin'ny toetr'andro Krismasy mifaninana izay handefasan'ny serivisy mpanjifa mahantra ny mpiantsena any an-toeran-kafa.
Ny fitsipika fototra amin'ny varotra iraisam-pirenena dia ny hoe, raha te hahomby, ny mpanjifa dia tsy maintsy mankafy traikefa fiantsenana tsara na aiza na aiza toerana misy azy ireo. Ireo mpivarotra antsinjarany dia tsy tokony handray ny mpanjifa mamaky ny sisin-tany ho kilasy faharoa. Mba hitazomana ny mpanjifa iraisampirenena, ny mpivarotra dia mila maka antoka fa tsotra, voarindra ary mangarahara ny tolotra isam-paritra.
Ilaina ireto fiheverana efatra manaraka ireto:
Manana safidy fandefasana marobe amin'ny sara antonony. Mifandraika amin'izany, manome ny dingana tsotra sy tsy misy risika dia zava-dehibe amin'ny mpanjifa tsirairay satria mametraka azy ireo am-pahatokisana izy ireo hividy an-tserasera aminao.
Atolory ny vola eo an-toerana; misy zavatra vitsy kokoa napetraka amin'ireo mpivarotra an-tserasera noho ny filàna kajy ny sandany amin'ny volany manokana rehefa mizaha, tsy lazaina intsony ny tsy fahatokisan'ny tahan'ny fifanakalozana.
Mikendry mandrakariva ny hampilamina ny sain'ny mpanjifa. Halaviro izay mety tsy ampoizina mety hitranga amin'ny mpanjifa (oh: ny sarany amin'ny fadin-tseranana sy ny fikarakarana sarany avy amin'ireo mpitatitra) amin'ny alalàn'ny resaka mialoha momba ireo sarany ireo.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, sorohy ny fandikana ny votoatin'ny tranokalanao na ny fananganana tranokala eo an-toerana. Ireo asa ireo dia mitaky fampiasam-bola avo lenta ary mazàna miteraka fiverenana ambany, noho izany, atsaharo ny hetsika rehetra mandra-pahatonganao manaporofo ny tenanao ao anaty tsena.
Tsy zakan'ny marika tsy hiraharaha ny fotoana mety amin'ny ecommerce mifanila amin'ny Krismasy ity. Ny fahatratrarana an'io dia tsy voatery mitaky fotoana be loatra sy fampiasam-bola ao an-trano; ny mpivarotra dia afaka mahita mpiara-miasa manerantany hanompo bebe kokoa ny zavatra ilain'izy ireo ary hihaona amin'ny zavatra andrasana amin'ny varotra iraisampirenena, hahatonga ny ROI handeha tsara
Mpiara-miasa amin'ny teknolojia toa Global-e afaka manohana ireo mpivarotra amin'ny fanomezana traikefa ara-barotra ecommerce iraisam-pirenena tsy misy fotony ary manolotra ny mpanjifa ny haavon'ny serivisy izay ilaina amin'ny tsenan'ny mpivarotra antsinjarany. Raha tsy misy ny fanandramana traikefa eo an-toerana, famantaranandro marina momba ny fandefasana na ny fahamendrehana manodidina ny vidin'ny varotra dia ho tafahitsoka ny mpivarotra ary hahita ny mpanjifany mandao ny fividianana na hifindra any amin'ny tranokalan'ny mpifaninana iray amin'ny resaka potsitra - fa tsy loza mety hitranga. ny mpanjifanao amin'ity Noely ity!
Tags: Krismasymaneran-efialan-tsasatrafandefasana iraisam-pirenenafanatontoloanavola eo an-toeranaantsinjaranyfandefasana tahan'nyfandikan-tenyfandikana tranonkala
Nir Debbi no mpiara-manorina sy lohan'ny varotra sy varotra ao Global-e. Nir dia manana traikefa 10 taona mahery amin'ny drafitra stratejika sy ny fampandrosoana ny orinasa eo amin'ny sehatra teknolojia sy ara-bola avo lenta. Talohan'ny niorenan'ny Global-e niasa dia SVP, Head of Strategy ary BizDev ao amin'ny Bank Hapoalim izy, taorian'ny fe-potoana iray dia Head of Retail Strategy ho an'ny banky. Manana MBA sy B.Sc. koa izy. amin'ny Toekarena, samy avy amin'ny Oniversite Tel-Aviv.
Fototra Twitter: Ahoana ny fampiasana Twitter (ho an'ny vao manomboka)